ह्वात्तै बढ्यो चिनीको मूल्य, किलोको कति पुग्यो ? « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं / नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य बढेको छ । अहिले बजारमा तरकारी लगायत बिभिन्न सामानको मूल्य बढी रहेको बेला चिनीको मूल्य पनि बढेको हो । मुलुकभित्र चिनीको मौज्दात सकिँदै गएपछि ठूला व्यापारीले चिनीको मूल्य बढाएका हुन् ।
एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ९६ पैसा तोकिएको छ । एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ २ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ
संसद विघटन : वैशाखमा आम निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव
के तपाईलाई थाहा छ हाम्रो आँखा कति मेगापिक्सेलको हुन्छ ? जान्नुहोस् आँखासम्बन्धी रोचक तथ्यहरु